Weerarro cunsurinimo oo laga soo tabinayo Mareykanka, kadib guushii Donald Trump – The Voice of Northeastern Kenya
Weerarro cunsurinimo oo laga soo tabinayo Mareykanka, kadib guushii Donald Trump
Waxaa isasoo taraya weerarada ku saleysan isir nacaybka ee dalka Mareykanka laga soo tabinayo tan iyo markii uu Donald Trump ku guuleystay in uu noqdo madaxweynaha xiga ee waddankaasi.
Baraha xiriirka Bulshada ee laga isticmaalo guud ahaan caalamka ayaa waxaa hareeyay tirinta lagu sameynayo weeraradaasi cunsuriyadda ku dhisan.
Mr Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada madaxtinimada waxa uu ku cel celinayay eedeymo uu u jeedinayay bulshooyinka laga tirada badanyahay ee dalka Mareykanka ee ay ka mid yihii Muslimiinta iyo Mexcican-ka, kuwaasoo uu ku tilmaamay in ay carqalad ku yihiin amaanka iyo dhaqaalaha Mareykanka.
Waxa uu sidoo kale xiligaas wacad ku maray in uu is hor taagi doono dad soo galootiga ah iyo Muslimiinta gaaraya Mareykanbka isla markaana uu darbi ku xiri doono xadka uu wadankiisa la wadaago dalka Mexico.
Hay’adaha u dooda xuquuqda dadka ayaa hadda ka qeyb qaadanaya mudaharaadyo ka socda magaaooyinka Mareykanka oo looga soo hor jeedo guusha Donald Trump, iyagoo ka walaacsan mustaqbalka dadka laga tirada badanyahay.
← Madaxweynaha Koonfur Africa mar kale ka badbaaday in kalsoonida lagala noqdo
Ciidamada dowladda Ciraaq oo lagu eedeeyay in ay xasuuq ka geysteen Mosul →